डा. केसीको अनशनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको चासो, माग पूरा गर्न वार्ता सुरु « Naya Bato
अनशन बसेको तीन हप्तापछि सत्तारुढ दलको बैठकमा डा. केसीबारे छलफल भएको हो। १९औं सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. केसीको जीवनरक्षाबारे सदस्यहरुले चासो राखेका छन् । सदस्यहरुले डा. केसीको अनशन र उनको जीवनरक्षाबारे जिज्ञासा राखेपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे आफूले चासोका साथ काम अघि बढाएको जानकारी गराएका हुन् । उनले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले वार्ता सुरु गरेको बैठकलाई जानकारीसमेत गराएका छन्।